Iindaba ze-Android: ukukhutshwa, iindaba, amarhe kunye nokunye! | I-Androidsis (iphepha 16)
I-Blackberry Evolve X kunye ne-Evolve: entsha yenkampani ngaphandle kwekhibhodi ebonakalayo kunye ne-Android OS
Dibana neBlackberry Evolve kunye ne-Evolve X, ii-smartphones ezimbini ezintsha ezivela kwinkampani yaseMelika enenkqubo yokusebenza ye-Android.
Ukucoca umhla wokubonisa weXiaomi Mi MIX 3
IXiaomi Mi MIX 3 iya kuziswa ngoSeptemba 15. Fumanisa ngakumbi malunga nomhla wentetho yefowuni yohlobo lwesiTshayina.
Iintengiso ziya kufika kwi-WhatsApp kwi-2019
I-WhatsApp iya kwazisa iintengiso kwi-app kunyaka olandelayo. Izibhengezo zifikelela ngokusesikweni kwisicelo semiyalezo.
Idatha engaphezulu iye yavuza kwi-Huawei Mate 20 kunye neMate 20 Pro, zombini zenziwe zekhamera kathathu
I-Facebook kunye ne-Instagram zazisa iimitha zomsebenzi
I-Facebook kunye ne-Instagram zikuvumela ukuba ulinganise indlela ozisebenzisa ngayo. Fumana ngakumbi malunga nenqaku elitsha eliza kuzo zombini usetyenziso.
NjengokuHlonipha noHuawei, kunye neNubia kunye ne-ZTE, u-Oppo wazisa iRealme, inkampani encedisayo ngoku ene-CEO entsha. U-Se Realme, igama eliphantsi lika-Oppo laziswe ngoMeyi kulo nyaka, usandula ukubhengeza isibhengezo se-CEO entsha. Sandisa iindaba kuwe!
Entsha evela kwinkxaso-mali yeHuawei ilapha. Sithetha ngeNqaku eliHloniphekileyo le-10, i-phablet esandula ukwenziwa enescreen esikhulu esichukumisa i-7 iNqaku le-Honor 10 ngoku lisemthethweni. Funda ngakumbi malunga nenkampani entsha ye-smartphone ngescreen esikhulu se-6.95-intshi ye-AMOLED kunye neKirin 970.
I-Qualcomm iqala ngemveliso ngobuninzi beSpapdragon 855
I-Qualcomm sele iqalile ukuvelisa i-Snapdragon 855. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqala kokuveliswa kweprosesa.
Ummangaliso u-Oppo uvuza kwiwebhu. Ingaba iza kuba yi-R17?
Iitheminali ezimbini ezitsha zeOppo zibhalisiwe kwindawo yogcino lwedatha ye-TENAA phantsi kwegama lekhowudi PBCM00 kunye ne-PBCT00. Ngelixa izixhobo zangoku ezintsha ze-Oppo zisandula ukuvuza kwi-TENAA database. Amarhe sele ekhombisile ukuba inokuba yi-R17.
I-Oppo R17 Pro iya kuba yeyokuqala ukuhamba nge-10GB ye-RAM
Kwiinyanga ezininzi ezidlulileyo, ngoJanuwari ngokukodwa, ukufika okucwangcisiweyo kwe-Vivo mobile ene-10GB yememori ye-RAM kwahletywa ukuba kuphele unyaka: i-XPlay 7. I-Oppo iyakube ilungiselela yonke into ukwenza umnyhadala apho i-Oppo yayiza kuphehlelelwa. I-R17 Pro, iselfowuni yokuqala ene-10GB ye-RAM kwintengiso.
Ukudlala kuGoogle kuthintela ukuzaliswa kweentengiso, iikopi kunye nokusetyenziswa kwemigodi ye-cryptocurrency
UGoogle Play utshintsha inkqubo yokupapasha isicelo. Fumanisa okungakumbi malunga notshintsho olwaziswa kwivenkile yeapp.
I-Instagram isungule isincamathelisi esitsha esikuvumela ukuba ukhethe ukuba ngubani oza kubona amaBali e-Instagram owafakayo kwiakhawunti yenethiwekhi yakho.
Isidlali somculo !!
Isamsung iqala ngophuhliso lweGPU yayo yokuhamba kwayo okuphezulu
Isamsung sele inenjineli esebenze kwi-NVIDIA iyila i-chip yayo ye-GPU. I-GPU esiya kuyibona kwi-Exynos.
Ukuhlaziywa kwePUBG Mobile kuhlobo lwe-0.7.0 ngoku iyafumaneka: imowudi entsha yemfazwe enobomi obungenasiphelo
Ubomi obungapheliyo bulindelwe kwimowudi yeMfazwe entsha yePUBG efike namhlanje kuhlaziyo lwenguqulo 0.7.0.
Iimpawu ezintsha ezivuzayo zeHuawei's Kirin 980
Ngokuhamba kweentsuku, amarhe malunga neprosesa elandelayo yeHuawei ayanda, isinika idatha eninzi apho ezinye izinto ezicociweyo zeKirin 980 zityhila ukuba le SoC iya kuxhotyiswa zii-77GHz Cortex-A2.8 cores kunye nezinye. . Siyakwandisa!
IHuawei Mate 20 Lite inokuza ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo
Njengoko iHuawei, inkampani yaseTshayina, ihlala ihamba neflegi yayo kunye nohlobo olukhanyayo, ngeli xesha izakusizisela umahluko I-Huawei Mate 20 Lite inokufikelela kwimakethi yehlabathi kwiinguqulelo ezimbini ezahlukeneyo apho isikhundla somfundi somnwe sitshintsha.
Ngoku unokwenza umnxeba wevidiyo ngeDuo kuMncedisi kaGoogle
Umncedisi kaGoogle udibanise umyalelo welizwi omtsha onokuthi wenze iminxeba ngevidiyo ngokusetyenziswa kwelizwi lakho ngokulula.
I-Asus ZenFone Max Pro M1 ene-6GB ye-RAM iya kukhutshwa ngoJulayi 26
UAsus, esazise i-1 kunye ne-3GB ye-RAM yeZenFone Max Pro M4, isizisela umahluko omtsha womthamo omkhulu we-RAM. Oku, uAsus usandula ukubhengeza ukuba i-1GB ye-RAM iZenFone Max Pro M6 iya kuthengiswa eIndiya ngoJulayi 26 phantsi kwexabiso le-Rs 14.990.
I-Sharp isungula i-Aquos C10 kunye ne-Aquos B10 eYurophu
I-Sharp iyenze i-Aquos C10 kunye ne-Aquos B10 ngokusemthethweni, ii-mobiles ezimbini ezintsha ezahlukileyo kuwo onke amacandelo kunye namacandelo, ekubeni iyimbophelelo ebadibanisayo ekuphela kwayo kwe-Sharp isungule i-Aquos C10 kunye ne-Aquos B10, ii-smartphones ezimbini ezintsha zenkampani ezi egxile kwimarike yaseYurophu.
Inyathelo lokhuseleko liza kuWhatsApp: ukufunyanwa konxibelelwano olukrokrisayo ekwabelwana ngalo ngoqhakamshelwano kwiwindows yakho.
IHuawei's Kirin 980 inokuboniswa kwi-IFA eBerlin ngoSeptemba
I-Huawei, phakathi kweentetho ezininzi ebizenzile izolo, inokubonisa i-HiSilicon Kirin 980, iprosesa elandelayo ye-HiSilicon Kirin 980 inokuboniswa kwi-IFA eBerlin ngo-Septemba ngo-Okthobha ngokwala marhe. Siyakwandisa!
Uyenza njani i-GIFS ngaphandle kwesicelo seapps
INokia X5 isemthethweni yoyilo lwenotshi kunye nekhamera ngasemva ezimbini
AbakwaNokia basizisela isixhobo esitsha. YiNokia X5, isiphelo sendlela enoyilo lweenotshi kunye nokubalulwa, nangona kuthobekile kwiNokia X5 esemthethweni! Sinikezela zonke iimpawu kunye neenkcukacha zobuchwephesha zesiphelo esitsha esisungulwe namhlanje.
Ngokukhawuleza uyakwazi ukubasusa abalandeli kwiakhawunti yakho kawonkewonke ye-Instagram
Kungekudala uza kuba nakho ukucima abalandeli kwiakhawunti yakho kawonkewonke ukuze ugcine iakhawunti yakho ikwimeko entle kwaye akufuneki uyenze yabucala.
I-Alto's Odyssey iyafumaneka kwiVenkile yokuDlala eqala ngoJulayi 26
Kwiminyaka yakutshanje, ngakumbi izitudiyo ezizimeleyo, azikhethanga ukwazisa imidlalo okanye usetyenziso ngaphakathi kwendalo ye-Android, ngenxa yomdlalo omtsha weAlto skier, iAlys's Odyssey iya kubetha iVenkile yokudlala ngoJulayi 26 kwaye iya kuba simahla nge-in-app. iintengiso kunye neentengiso
Helio A22: Inkqubo entsha ye-MediaTek esezantsi
Helio A22: Inkqubo entsha yeMediaTek ngoku isemthethweni. Fumanisa ngakumbi malunga neprosesa entsha yoluhlobo lwebanga eliphakathi
Ukuba uphoswa zii-emoji ze-Android, sele unazo kwi-Android Gboard nakwimiyalezo
Imiyalezo yeGboard kunye ne-Android isivumela ukuba sibe nee-emojis ze-Android ezaziwa ziibhloko kwakhona. Baye banyamalala okoko uAllo warhoxiswa.
IVivo Y71i, uphawu olutsha lwe-6-intshi ye-FullView yesikrini
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, ngo-Epreli, iVivo yasungula iVivo Y71 kwimakethi yaseIndiya njengefowuni ekumgangatho ophakathi apho iVivo Y71i yema ngephaneli ye-6-intshi ye-FullView HD + kwimarike yaseIndiya. Ngexabiso lezoqoqosho. Sinikela kuwe!
Izipesheli zoSuku lweNkulumbuso yo-2018. Ihlaziyiwe ngezixhobo zosuku !!
UKUHLAZIYIWE NGOKUNIKEZELWA KOMHLA 17! Kumsitho we-Prime Day 2018, ukubhiyozelwa kweAmazon kunikezelwa kunye nezaphulelo kubathengi bayo beNkulumbuso, kwi-Special Prime Day 2018 Offers. Ihlaziyiwe ngeminikelo yosuku !! ungaphoswa zizibonelelo ezithandekayo esizikhethele zona.
I-Oppo A3s iphehlelelwe njengomahluko ongenamandla kangako we-A3. Yazi!
Ngo-Epreli, u-Oppo wasungula i-A3, i-terminal enezinto eziphakathi kwinqanaba eliphantsi koyilo lwe-notch olusikhumbuza okuninzi kweflegi yangoku Sikubonisa i-Oppo A3s, i-smartphone entsha yenkampani yaseTshayina esele ikho Indiya.
Ibha yokuhambisa esezantsi kwi-Twitter ngoku ifumaneka ngokusemthethweni
Ngoku ungasebenzisa i-Twitter ngesandla esinye ngokuba ube nebhari yokukhangela kwi-app yezixhobo ze-Android ezantsi.
Ngoku ungasebenzisa umbono wesethelayithi yeeMephu zikaGoogle kwiAuto Auto kwiapp yakho yemoto
Ukuba unemoto ene-Android Auto efakwe kwinkqubo yezithuthi, ungasisebenzisa imbonakalo yesatellite yeemephu zikaGoogle.
Uphengululo lweLenovo S5
I-Lenovo S5, ukuthanda ebomvu kulapha ukuhlala phakathi kuluhlu lwe-Android. 13 + 13 Mpx ezimbini zekhamera, 5,7-intshi screen kunye 3.000 ibhetri
I-Instagram isandula ukwenza ukubakho kwemibuzo kwigosa lamabali e-Instagram. Ungazenza ngesitikha semibuzo.
UGoogle Pay sele ebonelela ngenkxaso yokupasa ebhodini kunye netikiti lomnyhadala
Kwiinyanga ezininzi emva kokunikezelwa kwayo, abasebenzisi beGoogle Pay banokusebenzisa eli qonga ukongeza ukupasa kwethu kunye namatikiti ekhonsathi.
I-Spotify ngoku ikuvumela ukuba uhlele iingoma kuluhlu lwadlalwayo kwifowuni yakho ye-Android
Ukusukela namhlanje kwi-Android unokutshintsha iodolo yeengoma kuluhlu lweSpotify. Inoveli yeGoogle OS.
Eyona midlalo mihlanu mihle ye-Android. Fumanisa olu khetho lweemidlalo ezincinci onokuzisebenzisa kwifowuni yakho ye-Android.
Ungazifihla njani iifayile ze-WhatsApp ezikhutshelweyo kwigalari yomfanekiso wakho
Ngoku unokufihla iifayile ezikhutshelweyo okanye imifanekiso kwigalari yefowuni yakho. Ngale ndlela uya kuzisindisa kusilelo olungalindelekanga.
Nandipha i-Kindle Unlimited iinyanga ezintathu nge-0 euro
IAmazon isinika esinye isipho esigqibeleleyo esivumela ukuba sonwabele i-Kindle Unlimited yee-euro ezingama-0 kwiinyanga ezintathu.
Ifowuni yasentsomini yeMatrix, iNokia 8110 ngoku iyafumaneka eSpain
Ifowuni yasentsomini evela kwiMatrix, iNokia 8810 ibuyela kwintengiso yinkampani yaseFinland kodwa kuguqulelo olubiza kakhulu.
IVivo Z10, isixhobo esitsha sefemu esine-Android Nougat
Izolo nje, iVivo isinike iVivo Z1i, indawo ekumgangatho ophakathi osele uyinxalenye yekhathalogu yenkampani yaseTshayina eza neQualcomm Snapdragon 636 SoC Dibana neVivo Z10 entsha, ibanga eliphakathi kunye necandelo elimangalisayo lokufota apho sinokufumana iifoto zomgangatho wobungcali enkosi kwiikhamera zayo.
Iselfowuni 1 ifika eSpain! Ixabiso kunye nokufumaneka kwale Android Go
Malunga neeveki ezimbini ezidlulileyo, iAlcatel ibizise iAlcatel 1 kunye nazo zonke iimpawu zayo kunye nokubalulwa kobuchwephesha ngendlela ethi iAlcatel 1 ifike eSpain ngexabiso elifikelelekayo lama-euro angama-69.99. Iya kufumaneka ukusuka nge-19 kaJulayi. Dibana nale Android Go!
Ngoku ungasebenzisa uGoogle Duo kuzo zonke izixhobo ngaphandle kokuthintelwa yiSIM khadi
Ukusukela namhlanje ungafaka iGoogle Duo kuso nasiphi na isixhobo sakho esiphathwayo esineakhawunti kaGoogle ngaphandle kwemida.
Sivavanye iBluboo S3, iselfowuni yaseTshayina enekhamera ezimbini kunye nescreen esingafakwanga. Fumanisa iimpawu zayo, izinto eziluncedo kunye nezinto ezingalunganga. Ngaba lukhetho olufanelekileyo?
IVivo Z1i: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusesikweni. Fumanisa ngakumbi malunga noluhlu oluphakathi oluphakathi lwegama lesiTshayina eliza kuphehlelelwa kungekudala
IHuawei Nova 3 iya kuziswa ngoJulayi 18
Iqinisekisiwe: IHuawei Nova 3 iya kuziswa ngoJulayi 18. Fumanisa ngakumbi malunga nokuqaliswa kwefowuni entsha yohlobo lwesiTshayina.
I-Android P Beta 3 ikuvumela ukuba usebenze ngesandla kwimowudi emnyama
I-beta yesithathu ye-Android P, isivumela ukuba sisebenzise ngesandla imowudi emnyama okanye ekhanyayo ngaphandle kokuxhomekeka kwiphepha lodonga esilifakileyo.
Iinkcukacha zokuqala malunga nokubukela kwePixel kaGoogle
Ukubukela kwePixel kaGoogle: Iinkcukacha zokuqala kunye nomhla wokukhutshwa. Fumanisa ngakumbi malunga neGoogle's Wear OS smartwatch eza ngoku.
IHuawei Nova 3 amanqaku atyhilwe nguTENAA
U-Huawei sele enophumelele kwi-Nova 2, i-middle-range yayo yasungulwa kunyaka ophelileyo, kwaye kunjalo, yi-Huawei Nova 3. Esi sixhobo besivuziwe kwi-TENAA IHuawei Nova 3 idlule kwi-TENAA kwaye sele siyazi uyilo kunye neempawu eziphambili. Siyakuxelela!
I-beta yesithathu ye-Android P yeGoogle Pixel ngoku iyafumaneka
I-beta yesithathu ye-Android P ngoku iyafumaneka kubasebenzisi abayinxalenye yenkqubo ye-beta kwaye baneGoogle Pixel
I-S-Pen ye-Galaxy Qaphela i-9 iya kukuvumela ukuba ulawule ifowuni
I-S-Pen ye-Samsung Galaxy Note 9 iya kubandakanya iBluetooth. Fumanisa ngakumbi malunga notshintsho oluza kuziswa yistylus ephezulu.
I-Vivo V9 eyahlukileyo isungula ngeQualcomm's SD660 SoC kunye ne-6GB ye-RAM
Malunga neenyanga ezintathu ezidlulileyo malunga, iVivo yasungula iVivo V9, iselfowuni ekumgangatho ophakathi eneempawu ezinokhuphiswano. Ngoku, inkampani isandula ukuvuselela iVivo V9 ngeProsesa ye-Qualcomm Snapdragon 660 kunye ne-RAM enkulu ye-6GB. Sinikela kuwe ifowuni entsha esungulwe yinkampani!
Unikezelo olwahlukeneyo kunye neenkcukacha zobuchwephesha zeOppo A5 ziyavuza
I-Oppo A5 iye yavela kwezinye iinguqulelo. Esi sixhobo siza kuza njengeselfowuni kuludwe lweenkcukacha eziphakathi. Ukongeza, nge-Oppo A5 ibonwa ngokunikezela kwayo ngenxa yokuvuza. Ukongeza, sele sazi ezinye zeempawu ezinokwenzeka. Siyakwandisa!
Imbeko yayiza kulungiselela i-6.9-intshi ye-Honor Ravel ngokokuvuza
IHuawei ngeyalele iodolo yeepaneli ezi-diagonal ezingama-6.9-intshi ngokolwazi oluvulwe kwinethiwekhi. Oku kubonisa ukuba ukuthunyelwaNgokolwazi oluvunyiweyo, iHuawei, ngenkxaso yayo encedisayo, inokuzifumana isebenza kwi-Honor nge-6.9 '' Super AMOLED iphaneli.
Uphononongo lweVidiyo Moto G6, «Ukubuya kweKumkani»
Uyakwazi ukukhetha, ukuba ungumlawuli weWhatsApp, ukuthulisa lonke igumbi leqela lokuncokola ukuthumela imiyalezo ngokwakho.
U-Huawei ubhengeze itekhnoloji ye-GPU Turbo ekuqaleni kwale nyanga. Le teknoloji, esekwe ekusebenzeni kwesoftware kunye nezixhobo, iHuawei iqinisekisa ukuthunyelwa kwetekhnoloji ye-GPU Turbo ngohlaziyo olubandakanya iifowuni zeHuawei kunye neHonor.
Sele ungowesigidi se-400 sabasebenzisi bemihla ngemihla abangena ukujonga okanye ukumilisela i-Instagram Stories. Isitika somculo songezwa.
IHuawei izakuhlaziya iifowuni zayo rhoqo kwiinyanga ezimbini
IHuawei ithembisa ukuhlaziya iifowuni zayo rhoqo kwiinyanga ezimbini. Fumana ngakumbi malunga nesithembiso sophawu lokuhlaziya izixhobo.
IHuawei izakuvula ifowuni yokuqala ye-5G ngoJuni 2019
Ifowuni yokuqala yeHuawei ene5G iza kufika ngoJuni 2019. Fumanisa ngakumbi ngale fowuni apho uHuawei afuna ukuqhubela phambili i-5G.
IMotorola yazisa umsitho nge-2 ka-Agasti
IMotorola izakwazisa iifowuni ezintsha nge-2 ka-Agasti. Fumanisa ngakumbi malunga nomsitho owenziwe ngumbutho wenyanga ka-Agasti.
Nge "Show mode" ungaguqula i-Amazon Fire yakho ibe yi-Echo Show ene-Alexa njengoyena ndoqo ophambili. IAmazon Fire HD 10 Ushicilelo lwaBantwana alulahlekanga.
U-Sony uye waziwa njengenye yeenkampani ezaziwayo nezisoloko zisebenza kudala ukusukela oko yaqalwa. Oku kubonisa ukuba uSony uza kuvala ukusebenza eTurkey, e-Afrika nakuMbindi Mpuma ngenyanga ka-Okthobha. Yile nto ichazwe nguEvan Blass. Siyakwandisa!
Isamsung isandula ukwazisa itekhnoloji entsha ebizwa ngokuba yi-ISOCELL Plus. Olu luphuculo lwe-ISOCELL olusetyenziswe kwiimvakalelo ze-CMOS ezivezwe yinkampani yakwa-Samsung isandula ukwazisa iteknoloji entsha ebizwa ngokuba yi-ISOCELL Plus. Esi sisongezo se-ISOCELL esiboniswe yinkampani kwiminyaka ethile edlulileyo.
Ireyithi ye-1 ye-SUOP ngoku ngexabiso elifanelekileyo
Fumana i-SUOP 1 GB yenqanaba ngoku ngesaphulelo. Fumana ngakumbi malunga neli nqanaba, kunye nesaphulelo osifumanayo xa uyiqesha ngoku.
Eyona fowuni yeNokia iya kufika kwi-IFA 2018
Eyona fowuni yeNokia iza kuboniswa kwi-IFA 2018. Fumanisa ngakumbi malunga nemodeli entsha yohlobo oluya kufika kwisiqingatha sesibini sonyaka.
IMeizu X8 iya kuba ngcono kuneXiaomi Mi 8 SE, ngokwe-CEO uJack Wong
UJack Wong, u-CEO weMeizu, uziva enentembelo yokuba iMeizu X8 iza kuba namandla kangakanani, isixhobo esiphakathi senkampani, ngokutsho komphathi omkhulu weMeizu uJack Wong, iMeizu X8 izakubangcono kakhulu kunale intsha. 8 SE, isixhobo sokuqala sikaXiaomi esine-Snapdragon 710.
Uvavanyo lwe-EMEET yeCore 2 yoVavanyo
I-EMEET Office Core 2 Somlomo onobuchule inikezela ngamava akumgangatho wokumamela, uyilo olukhethekileyo kunye nokuzimela okukhulu
I-Snapdragon 632, 439 kunye ne-429: Iiprosesa ezintsha ezingabizi kakhulu
I-Snapdragon 632, 439 kunye ne-429: Iiprosesa ezintsha zeQualcomm. Fumanisa okungakumbi malunga neeprosesa ezintsha ezifikelela kumaxabiso aphantsi.
I-LG V40 inokuba neekhamera ezintlanu zizonke
I-LG V40 iya kubonisa inani elipheleleyo leekhamera ezintlanu. Fumanisa ngakumbi malunga nesiphelo esitsha esivela kwi-LG esiza kubheja kwezona zilungileyo ngokweekhamera.
Ukucaciswa kunye neempawu zethebhulethi entsha ye-iBall Imprint 4G
iBall, inkampani engaziwa kangako kwintengiso yegadget yomhlaba, isungule i-iBall Imprint 4G, ithebhulethi yayo entsha eza noyilo iBall isungule i-tablet yayo yamva nje ... Sithetha ngeBall Imprint 4G, isixhobo esine uyilo kunye nezinye izinto ezintle.
I-mBack kaMeizu ayihambi ngaphandle kweefowuni ezizayo ezingaphantsi kwenkampani
Izitshixo zokufikelela ngokwasemzimbeni ezinabafundi abadityanisiweyo zeminwe yayiyindlela yokungqinisisa yokukhetha kubasebenzisi abaninzi ngaphambi kokuba iMeizu ingenanjongo yokuvalelisa kubuchwephesha bayo be-mBack ngaphandle kweefowuni ezizayo zebrendi eziza kufika ngaphandle kwe-bezels. Yile nto ichazwe yi-CEO.
Iimodeli ezahlukeneyo zakwaNokia ziya kuvulwa ubuso
AbakwaNokia baya kuzisa ubuso ekuvulekeni kweefowuni zabo ezininzi. Fumana ngakumbi malunga nolu hlaziyo luza kungekudala kwezi fowuni.
Isamsung ye-Samsung S10 iya kufika inenguqulo enekhamera kathathu
I-Galaxy S10 iya kuba nohlobo olunekhamera kathathu. Fumanisa ngakumbi malunga nesiphelo esitsha senkampani yaseKorea kunye nekhamera yayo engasemva kathathu.
Umboniso wenkqubela phambili we-Android P 3 ngoku iyafumaneka kwiNokia 7 Plus
INokia 7 Plus, ngoku unokufaka i-beta yesibini ye-Android P yoPhuculo loPhuculo
Ukucoca okokuqala kwe-Samsung nge-Android Go
I-Samsung Galaxy J2 Core: Imodeli yokuqala ye-Samsung Go ye-Samsung. Fumana ngakumbi malunga nokubalulwa kwale modeli isezantsi,
Isamsung ayizukufikelela kwithagethi yokuthengisa ye2018
Ukuthengisa kwe-Samsung kuya kuba ngaphantsi kokulindelweyo. Fumanisa ngakumbi malunga nokuthengisa kwenkampani okusilela kulindelo.
UBethesda uthatha iWarner Bros enkundleni yomdlalo weWestworld: esetyenzisiweyo ikhowudi yeShelout
UWarner Bros kunye nabadali baseWestworld baziswe kwityala nguBethesda ngokusebenzisa ikhowudi yesibini yokuHamba komdlalo omtsha.
INokia X6 ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka isungula e China
INokia X6 isungula eChina ngombala omtsha ohlaza okwesibhakabhaka. Fumana ngakumbi malunga nenguqulelo entsha yefowuni esele iqalisiwe e-China.
Isamsung sele ivavanya ifowuni yayo yokuqala nge-Android Go
Ifowuni yokuqala ye-Samsung ene-Android Go ikwisigaba sokuvavanya. Fumana ngakumbi malunga novavanyo olwenziwa luphawu ngale fowuni.
Iimpawu zeSony Xperia entsha zihluziwe kumnatha. Ngaba iya kuba yiprimiyum yeXZ3?
Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo, enye idatha yavuza kwi-Sony Xperia entsha ngomlinganiso wescreen se-18: 9. Ngokomfanekiso-skrini opapashiweyo, i-Sony Xperia entsha engaqondakaliyo ivele kwi-Intanethi phantsi kwenombolo yemodeli 'H8616'. Sikwazisa iinkcukacha!
Ukuphonononga i-Elephone A4, i-terminal engaphantsi kwe-100 yee-Euro inomdla kakhulu
IMeizu X8: iselfowuni elandelayo yenkampani iza kufika nge-SD710 ngokwe-CEO
Uphawu lwesiTshayina, ngokwembonakalo, belugxile kuphela kwi-Meizu 16 kunye ne-16 Pro, isiphelo sesibini esiphakamileyo esiza kuthi sifike kwintengiso ngaphakathi kwe-CEO ye-Meizu uJack Wong ubhengeze ngeqonga elisemthethweni lenkampani ukuba bayasebenza kwi-Meizu X8, kwaye iza ne-SD710.
IHuawei sele isebenza kwiprosesa yayo entsha yeKirin 1020
I-Kirin 1020: Iprosesa yeHuawei yesiphelo esiphakamileyo. Fumanisa ngakumbi malunga neprosesa entsha yohlobo lwesiTshayina ngesiphelo sayo esitsha.
Inguqulelo yamanye amazwe yeNokia X6 iyavela kwiwebhusayithi yenkampani
INokia X6 ivela kwiwebhusayithi esemthethweni yenkampani. Fumana ngakumbi malunga nesigwebo sokuba ifowuni yaziwa ngokusungulwa kwilizwe liphela.
I-Instagram sele ifikelela kubasebenzisi abazizigidi ezili-1.000
I-Instagram sele ifikelele kubasebenzisi abali-1.000 lezigidi. Fumanisa ngakumbi malunga nenani labasebenzisi esele lifumene inethiwekhi.
Fumana inqanaba likaPepephone elingenakoyiswa ngedatha yeselula
Inqanaba likaPepephone ngokungenakubekwa ngoku ngedatha yeselula. Thatha le ntengiso ikhethekileyo yezinga elifanelekileyo lomqhubi, ngoku unedatha engaphezulu.
I-Energizer Hardcase H500S: ifowuni entsha eyomeleleyo evela kwifemu ngebhetri ye-3000mAh
I-Energizer, umenzi owaziwayo weebhetri, izibane kunye nezinye izixhobo, uzise i-smartphone egxile ekujoliseni, ngaphezulu kwe-Ennergizer kutshanje yazise i-Energizer Hardcase H500S, iselfowni esisezantsi esisezantsi esinoyilo oluncinci kunye nebhetri ye-3000mAh.
Iphaneli engaphambili yeGlass Qaphela 9 icociwe eqinisekisa ukuba i-Samsung iyapasa inotshi
Iphaneli yangaphambili ye-Galaxy Qaphela i-9 iye yavuza kwaye njengoko besinokulindela, inotshi ayikabonakali kwibala le-Galaxy
OPPO Fumana ixabiso X kunye nomhla wokukhutshwa ubonakalisiwe
Sele silazi ixabiso kunye nomhla wokumiselwa kwe-OPPO Fumana i-X. I-brand ekugqibeleni ityhila ixabiso lesiphelo sayo esitsha kunye nokuqaliswa kwayo eYurophu.
Ukuvuza okuvela kwi-Sony Xperia XZ3 kwi-GFXBench
Isony kubonakala ngathi sele ilungile i-Sony Xperia XZ3, iflegi yayo elandelayo eza kufika kunye neempawu ezininzi kunye neenkcukacha zobuchwephesha, ngaphandle kwe-Sony Xperia XZ3 ivele kwi-GFXBench kunye neempawu zayo eziphambili kunye neenkcukacha zobuchwephesha. Sineenkcukacha kubo bonke!
Isamsung iya kuvelisa eyayo i-GPU yeefowuni zayo
Isamsung iya kuvelisa ii-GPU zeefowuni zayo. Fumana ngakumbi malunga nesigqibo senkampani sokuvelisa iiGPUs zecwecwe kunye nee-smartphones.
IMotorola yazisa isisombululo seFlip Phones
IMotorola iyakulungisa ukususwa kwescreen sokusonga. Fumana ngakumbi malunga nesisombululo senkampani sokusonga iifowuni.
Umculo ku-YouTube ekugqibeleni ufike eSpain namhlanje
Umculo ku-YouTube ufikelela kumazwe ali-17 kubandakanya nelethu ukonwabela iividiyo zomculo ezingenazintengiso kunye nokukwazi ukudlala ngasemva.
I-Titanium ye-8845 M5 ivela kwi-TENAA yoyilo olufana nolo lwalungaphambi kwayo
I-8848 yinkampani yaseTshayina eyaziwayo ngokusungula iifowuni zexabiso eliphambili kakhulu kunye noqobo kunye noyilo olungaqhelekanga. Ifowuni yamva nje ekhutshwe yi-8848 M5 Titanium isandula ukuqinisekiswa yi-TENAA kunye neempawu ezininzi kunye neenkcukacha ezenza ukuba ifane nengaphambili kwayo. Siyakuxelela!
Uphengululo lweMyGica ATV1960: Amandla akummiselo wakho !!
I-Moto C2 iya kuba yifowuni yokuqala ye-Motorola ene-Android Go
IMoto C2: Ifowuni yokuqala yeMotorola ene-Android Go. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha kraca eya kuthi ifike esiphelweni.
I-Galaxy Qaphela i-9 iza kufika kuhlobo lwe-512 GB yokugcina
I-Galaxy Note 9 inenguqulo ene-512 GB yokugcina. Fumanisa ngakumbi malunga nenguqulelo entsha eza kufika ivela kwisiphelo esiphakamileyo.
Ukuphonononga iYI-Cloud Dome Camera 1080P
Dibana ne-YI-Cloud Dome Camera 1080P, ikhamera ye-wifi enesisombululo esipheleleyo se-HD onokuyilawula kwi-smartphone yakho kunye nezinye izinto eziluncedo kunokuba ucinga
Uyilo lwe-OPPO Fumana i-X ityhilwe kwisibhengezo esitsha
Uyilo lwe-OPPO Fumana i-X sele ivuza ngokupheleleyo. Fumanisa ngakumbi malunga noyilo oluza kuba nesiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina.
IVimble 2, umgangatho ophezulu, iGimbal ekufutshane nengcali ye- € 99
I-Vimble 2, i-quimb-professional Gimbal enokuthi ibe yeyakho nge-euro ezingama-99 usebenzisa i-coupon ekhethekileyo ye-Androidsis
I-Chuwi LapBook Air
I-Chuwi LapBook Air 2018, ilaptop enoyilo oluhle olulandelwe kwi-Macbook Air ene-aluminium eyenziwe nge-anodized kunye nomzimba ocekeceke.
Ukuphonononga iTV BOX ABOX A4
Ukuphononongwa kwevidiyo I-TV BOX yohlobo lwe-ABOX yemodeli A4 ene-2 ​​Gb yememori ye-RAM kunye ne-16 Gb yayo yokugcina ngaphakathi ngexabiso lehlazo.
I-ARK: Ukusinda kuguqulwe ngokutsha: ukuvela kwezinto okanye ukubuyisela kwakhona?
I-ARK esindileyo yavela apha kwi-Android, kodwa ngaba yenzelwe ukuba iyonwabele kwiselfowuni? Sikukhupha ngaphandle kwamathandabuzo.
Fumana iHuawei Y7 2018 yasimahla ngezinga elingapheliyo likaYoigo
Unikezelo: Ireyithi engapheliyo kaJoigo kunye neHuawei Y7 2018 simahla. Fumanisa okungakumbi malunga nale nyuselo apho ufumana isixhobo simahla.
Ukucoca i-Meizu 16 kunye ne-16 Pro, isiphelo esitsha sophawu
I-Meizu 16 kunye ne-16 Pro: Ukucaciswa, uyilo kunye namaxabiso avuza. Fumana ngakumbi malunga nesiphelo esitsha sophawu lwesiTshayina oluza kufika ngo-Agasti.
%% Gqibezela uphononongo lwevidiyo kunye nesithethi esitsha se-Energy Sistem yeBluetooth, i-Energy Music BOX 5+ YALL Edition%
Ukudlala kukaGoogle kuvumela abaphuhlisi ukuba babuyisele imali yokuthenga ngaphakathi nohlelo
Fumanisa ngakumbi malunga nentshukumo entsha ethathwa nguGoogle Play ukwenza ukuba kubelula kubasebenzisi ukubuyisa ukuthengwa kwabo ngaphakathi nohlelo kunye nemirhumo.
Uhlaziyo olutsha lweNokia X6 likuvumela ukuba ufihle inotshi
INokia X6 ikuvumela ukuba ufihle inotshi ngohlaziyo olutsha. Fumanisa ngakumbi malunga nendlela efikelela ngayo enkosi kwifowuni apho inotshi inokufihlwa khona.
UFord wenza ibhatyi efanelekileyo kubahambi ngebhayisikile
Iqela labasebenzi bakwaFord lenze ibhatyi efanelekileyo ejongene nokwandisa ulwazi olunokuthi lunikezwe ngabaqhubi.
Ifowuni yokusonga yakwaSamsung yayixabisa i-1.600 euro
Fumanisa ngakumbi ngexabiso iGlass X, ifowuni enokusongelwa eyenziwa yiSamsung, iya kuyilanda xa ihlasela iivenkile. Iya kubiza kakhulu.
Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo, iVivo ibhengeze iVivo Nex kwiinguqulelo ezintathu ezahlukeneyo, itheminali entsha yenkampani efika emva kokunikezelwa kweVivoVivo isandula ukubhengeza iVivo Nex kwiinguqulelo ezintathu ezahlukeneyo, iselfowuni entsha yenkampani efika emva Ukunikezelwa kweVivo Apex kwi-MWC.
Oppo uqinisekisa ezona mpawu ziphambili zokufumana i-X
Sikuxelela zonke iinkcukacha u-Oppo aqinisekisile malunga ne-X yokufumana
IHuawei ilindele ukuthengisa iifowuni ezizigidi ezingama-200 kulo nyaka
IHuawei ifuna ukuthengisa ngaphezulu kweefowuni ezingama-200 ezigidi ngo-2018. Fumana ngakumbi malunga neenjongo zentengiso yohlobo lwesiTshayina.
Uhlalutyo lweBlackview P10000 Pro
I-Blackview P10000 Pro inenye yeebhetri ezinkulu kwintengiso, kunye ne-4 GB ye-RAM, kunye nekhamera ebalaseleyo yeSony ezimbini
INokia X6 International Version iqinisekisiwe eTaiwan
I-HMD Global isungule iNokia X6 phantse kwinyanga ephelileyo e-China, kwaye ukusukela ngoko, esi sixhobo sibe yimpumelelo epheleleyo kwintengiso, ukulawula ukuthengiswa kwi-Nokia X6 kungqinwe yi-NCC yaseTaiwan, yiyo loo nto ukumiliselwa kwayo sele Iqhubekeke yaphuma kummandla waseTshayina ngeentsuku ezimbalwa.
INokia X6 iyathengisa kwakhona eChina
INokia X6 iphinda ithengiswe ithengiswe ngokutsha eChina. Fumanisa ngakumbi malunga nempumelelo yokuba phakathi kwinqanaba lebhrendi ekumiliselweni kwayo.
Amaxabiso acociweyo kunye nevidiyo yeVivo Nex
Amaxabiso eVivo NEX entsha sele evuziwe. Fumana ngakumbi ngamaxabiso eziza kuba nazo iifowuni ezintsha zohlobo lwesiTshayina.
I-Google Pixel 3 iya kusebenzisa ukutshaja ngaphandle kwamacingo
UGoogle wazisa ukutshaja ngaphandle kwamacingo kwiiPixels ezintsha. Fumana ngakumbi malunga nenqaku elitsha eliza kuqaliswa kwisizukulwana esilandelayo.
I-ZTE ifikelela kwisivumelwano sokuqhubeka nokusebenza kwintengiso
I-ZTE ifikelela kwisivumelwano ne-United States ukuba iphinde isebenze. Fumana ngakumbi malunga nesivumelwano umenzi waseTshayina afikelele kuso.
MyTuner Radio, eyona ndlela yokumamela kwisikhululo sakho osithandayo kwi-smartphone yakho
Isicelo seRadio MyTuner sesinye sezona zicelo zibalaseleyo, ukuba ayisosona sicelo silungileyo sokumamela kwizikhululo zethu esizithandayo kwi-Intanethi. Khuphela kwaye uzame esi sicelo ngokungena apha.
Ukuphonononga iHuawei P20 PRO
Emva kwesithuba esingaphezulu kweveki sokusetyenziswa kakhulu, nalu uphononongo lwevidiyo yeHuawei P20 PRO apho ndikuxelela konke okuhle nayo yonke into embi esinikwa yona ngumzi weHuawei.
I-Samsung Galaxy J7 (2018) ilapha. Sinikela kuwe!
I-Samsung Galaxy J7 (2018) ibonakalisiwe yinkampani eneempawu ezithile zobuchwephesha. Siyazicacisa!
Oppo Fumana amanqaku e-X avuza kwi-TENAA ngokukhawuleza
I-Oppo Fumana i-X isandula ukuvuza kwi-TENAA iqinisekisa iinkcukacha ezininzi malunga neempawu zayo kunye neenkcukacha zobuchwephesha.
Inqanaba elingenakuthelekiswa nanto lePepephone ngoku lihlawulelisiwe
Inqanaba leTrio likaPepephone elicwangcisiweyo liyafumaneka ngexabiso elifanelekileyo. Fumana ngakumbi malunga noku kukhuthazwa lelinye lawona manqanaba aphezulu opharetha, ngoku akhoyo ngesaphulelo.
I-European Union iceba ukwenza isohlwayo kuGoogle kwi-Android monopoly
UGoogle uhlawuliswe yi-European Union ngokuzimela kwi-Android. Fumanisa ngakumbi malunga nokuhlawulwa kwenkampani ezayo ngeli hlobo.
IBlackBerry KEY2 ilapha, uyilo olunye kunye nokuhlaziywa kweenkcukacha
IBlackBerry KEY2 ingenisiwe ngokusemthethweni, sikuxelela zonke iinkcukacha zale fowuni intsha yeBlackBerry
I-Snapdragon 429 kunye ne-439: Iiprosesa ezintsha ze-Android Go
I-Snapdragon 429 kunye ne-439: Iiprosesa ezintsha ze-Qualcomm ezisezantsi. Fumanisa ngakumbi malunga neeprosesa ezintsha zohlobo lweAmerican brand ezifikelela kuluhlu oluninzi lwezoqoqosho.
Hlonipha umdlalo kunye neNhlonipho 9i: ezi zimbini zintsha zokudlala zemidlalo yenkampani eneGPU Turbo
Ifemu ye-chionor isandula ukubonakalisa i-Honor Play kunye ne-9i, ii-smartphones ezimbini zokudlala ezineGPU Turbo, intsebenzo ethembisa ukuba amava okudlala alula, asebenza ngokukhawuleza kwaye akhawulezayo ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-60 kusetyenziswa amandla ancitshisiweyo angama-30%. Sibazisa kuwe!
IXiaomi Redmi 6 inokuboniswa ngomso
IXiaomi Redmi 6 inokubonakala ngomso kumsitho apho uXiaomi eza kuthi abonise into "entsha"
Ukuba uvela kwi-Prime Prime yaseAmazon ngoku unokufikelela kwiAmazon Music simahla
Ngoku iAmazon Music isimahla kubathengi beAmazon Prime. Ukukhethwa kweengoma ezizigidi ezi-2 kunye nokusikelwa umda kwiiyure ezingama-40 ngenyanga ngaphandle kweentengiso kwaye uhlala unokhetho lokukwazi ukukhuphela ukumamela ngaphandle kweintanethi.
Iifowuni ezili-10 ezinamandla kuMeyi 2018, ngokwe-AnTuTu Benchmark
I-AnTuTu isizisela uluhlu lwezona zixhobo zinamandla kwintengiso yenyanga ngenyanga, apho, kwesi sihlandlo, sinokuthi siqaphele ukongezwa kwe-OnePlus 6, i-smartphone entsha yeflegi eyasungulwa kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo yinkampani yaseTshayina. Siyakwandisa!
Imemoji ziimpendulo zika-Apple kwi-Samsung ye-E Emoji
Inkampani esekwe e-Cupertino yazise into entsha ebizwa ngokuba yiMemoji, ephefumlelwe ngokucacileyo yinkqubo ye-emoticon enokwenzeka kunye nobuso bethu obuphefumlelwe yi-AR Emojis yeGPS S9.
I-Aermoo V1 esona sandi siphathwayo «singenamanzi»
I-Aermoo V1 ingaba liqabane laseholideyini olifunayo, isithethi seBluetooth esinika amandla, isandi esigqwesileyo kunye nokuzimela okukhulu, kwaye ikwanesiqinisekiso se-IPX6
Fumana i-Galaxy S8 + xa ithengiswa ngezinga elingapheliyo likaYoigo
Fumanisa ngakumbi ngesi sibonelelo seGPS S8 Plus onokuyithatha ngereyithi engapheliyo yeYoigo kwaye ke ugcine kakhulu ekuthengeni uluhlu oluphezulu lwe-Samsung.
I-OPPO Fumana i-X iya kuboniswa ngoJuni 19 eParis
Iqinisekisiwe: I-OPPO Fumana i-X iya kuboniswa ngoJuni 19 eParis. Fumanisa ngakumbi malunga nokufika kwefowuni entsha yohlobo lwaseTshayina, ekwabonisa ukungena kwayo kwintengiso yaseYurophu.
AbakwaNokia bazise ifowuni nge-Snapdragon 710 ekwindla
AbakwaNokia bazakwazisa i-smartphone ngeSpapdragon 710 kokuwa. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha kraca eya kuthi ifikelele kwinqanaba eliphakathi kwaye banethemba lokuloyisa eli candelo.
I-Samsung Galaxy S9 + ene-256GB yememori yangaphakathi ngoku iyafumaneka eSpain!
I-Samsung Galaxy S9 Plus sele ikhona iyathengiswa eSpain kwinguqu yayo ene-256GB yendawo yokugcina yangaphakathi ngexabiso elingaphezulu kwewaka nje lee-euro. Siyakwazisa!
Ifowuni ye-Asus ROG: I-Smartphone eNtsha yeMidlalo
Ifowuni ye-Asus ROG: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha yokudlala eya kuphehlelelwa kwintengiso kwiinyanga ezimbalwa.
Imifanekiso emitsha kunye nokubalulwa okucacileyo kweMandla eMandla enye
IMandla enye yeMotorola: Imifanekiso evuzayo kunye neenkcukacha. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni yokuqala yophawu lokusebenzisa i-Android One njengenkqubo yokusebenza kwayo.
Ityhile imigaqo yokuqala ye-OPPO Fumana u-X
I-OPPO Fumana i-X: Ukuchazwa kweenkcukacha kunye noYilo oluNgcolileyo. Fumanisa ngakumbi malunga nefowuni entsha yohlobo lwesiTshayina oluya kuba ngumzekelo apho uphawu lungena ngokusemthethweni eSpain.